AMISOM: Dagaalyahaniinta ajnebiga ah iyo al-Shabaab oo ka qaxaya Soomaaliya - Sabahionline.com
AMISOM: Dagaalyahaniinta ajnebiga ah iyo al-Shabaab oo ka qaxaya Soomaaliya Maarso 02, 2012
Taliyaha ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa Khamiistii (1-da March) sheegay in dagaalyahaniintii ajnebiga ahaa iyo xubno al-Shabaab ihi ay ka cararayaan Soomaaliya, Idaacadda Shabeelle ee Soomaaliya ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Al-Shabaab oo qarka u saaran burbur: AMISOM
Midowga Afrika oo baaraya weerarkii lagu qaaday masaajid Muqdisho ku yaal
Boqollaal ka mid ah taliyayaasha al-Qaacida oo ka garab diriri jiray al-Shabaab ayaa haatan fakanaya si ay uga badbaadaan hawl-gallada ciidan ee ay soo wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo nabad-ilaaliyeyaasha AMISOM ayuu yiri Maj. Gen. Fred Mugisha. Taliyaha ayaa sheegay in ay ciidamadu ka taxaddarayaan in rayidku wax ay ku soo gaaraan Ceelasha Biyaha, oo xero u ah barakacayaasha ee bannaanka Muqdisho, iyadoo buu yiri ay AMISOM iyo ciidamada dawladdu sii ballaarinayaan ololahooda. “Aad baannu uga taxaddaraynaa dhib rayidka soo gaara marka aannu weerarayno aagagga ay Soomaaliya ka haystaan kooxha mintidka ah,” ayuu yiri Mugisha.
Midawga Afrika ciidan ayuu sameeyey Soomaaliya kusoo celiya xasiloonida iyo midnimada' Kaalinta ciidankan waa iney keenaan sinaan iyo wada hadal si soomaaliya loogu soo dabaalo xaalad ammaan iyo mid dhaqaale oo la aqbali karo. Nasiib darro, xarakada Alshabab iyo Alqaacida ayaa soo faragalinaya hawlgalkan wanaagsan ee ciidamadan. Danta ciidankan leeyahay waa in wada hadal la sameeyaa soomaaliduna dib-u-heshiisiin loo dhanyahay ay sameeyaan oo nabad lagu soo dabaalo meelo badan oo kamid ah dhulka soomaaliya. Ugu dambeyn, waxay jecelyihiin iney soomaaliya ka dhigaan meel nabad ah oo dadkiisoo dhan ay beeraha falan karaan. Intaa waxaa dheer ciidankan Midawga Afrika waxay leeyihiin kaalin ah kaalmayn dhinaca farsamada ah, waxayna hubka ka qaadaysaa dagaalyahamiintoo dhan ee Soomaliya joogta sidaasna ammaanka kusugaya. Dadka soomaalida ah ee caadiga ah aad ayey u jecelyihiin ciidamada midawga Afrika maxaa yeelay waxay bixiyaan gargaar bilaash ah (Sida daaweynta dadka xanuunsan iyagoo qaarna dawo la siiyo qaarka isbataalka la seexiyo iyo siinta dadka biyo nadiif ah). Waxa maraykanku ka naxsanyahay waa sii badashada dadka ku dhimanaya ama kuwaxyeelloobaya hawlgalka ciidamada midawga Afrika.
Al-shabaab markaan eegno, ilaahay idankii, haba yaraatee dadka Somalia wax taageera ah kama helayaan. Argagixisadinan xaqiiriinta ah, in kastood isku daydaan inaaad dadka Soomaaliya waxyeellaysaan ood Al-qaacida iyo ururrada argagixisada ah kaalmaysataan, ugu dambayntii waad guul darraysan doontaan, mar kastana dadka soomaaliyeed waxay aad u caddeeyaan inay fikraddiinna kasoo hor jeedaan. Waxay isleeyihiin Soomaaliya nasiib baad ku yeelan doontaan oo dadkaad waxyeellayn doontaan markaasay raaci kuwa shayaadiinta raacay iyo xooggaga burburka, qaraxyada iyo dilka aan loo aabayeelin ee aad kula kacdaan dadka aan waxba galabsan. Waxaad tihiin cadawga diinta Islaamka ee nabadda. Ruux kasta oo idinku raaca inuuu idinla qaado waddada burburka waa cadawga Islaamka muhiimna ma aha ruuxaas inuu soomaali yahay ama uu meel kale ka yimid.